SEO kuma istaageyso bartaada internetka | Martech Zone
Sabti, Febraayo 12, 2011 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waqti ka waqti, Highbridge waxay boos ku leedahay jadwalkayaga mashquulka ah si loo caawiyo shirkadaha aan iskaashiga leenahay. Waxaan blog ku saabsan qaar ka mid ah, iyaga ku leeyihiin on the raadiyaha raadiyaha, Waxay u qaabeeyeen qaar ka mid ah macluumaadka sawirada kuwa kale, waxaanan siineynaa ruqsadaha software-ka (waxaan kaliya u dirnay farabadan kormeerkeena warbaahinta bulshada) iyo xitaa sameynta xoogaa kor u qaadista SEO ah! Ciidaha sanadkii la soo dhaafay, waxaan go'aansanay inaan sidan u sameyno oo dhan ee wada-hawlgalayaashayada.
Mid ka mid ah hadiyadahaasi waxay ahaayeen xirmo dhiirrigelin ah oo loogu talagalay Wakaaladda Suugada, a suuq geynta guryaha shirkadda. Adam wuxuu had iyo jeer caawiyaa ganacsigeyga - ama wuxuu ka caawiyaa koodhka iyo shaqada kaabayaasha, na dhiirrigeliyaa, ama inuu noqdaa saaxiib taageera oo aan ku tiirsanaado. Waxay ahayd waqtigii lacag bixinta! Qiimaha xirmadaani waxay ahayd $ 1,000.
Waxaan bartilmaameedsanay qaar ka mid ah baloogyada, qaar ka mid ah bogagga calaamadaha, iyo qaar ka mid ah ilaha kale ee khuseeya oo waxaan u aadnay inaan ka shaqeyno qorista waxyaabo aad u wanaagsan meel kasta oo ku saabsan magaca Adam. Wakiilka Suugada ayaa horeyba loo habeeyay laguna qiimeeyay ereyada muhiimka ah qaarkood - sidaas darteed waxaan ku koobnay iyaga. Dhiirrigelinta ayaa shaqeysay Adam-na wuu ku roonaaday inuu la wadaago natiijooyinka.
Laga soo bilaabo Janaayo (in ka yar 60 maalmood), Wakiilka Suugada Analytics qaaday horumar la taaban karo ka dib dalacsiinta:
Booqashooyinku waa 47%
Faallooyinka ayaa kor u kacaya 54%
Heerka soo kabashada ayaa hoos u dhacay 10.5%
Waqtiga goobta ayaa kor u kacaya 37%
Booqashooyinka cusubi waa 7%
Markaad eegto tirakoobyadan si wadajir ah, waxaad ogaan doontaa in dhammaan lambarradu ay u dhaqaaqeen jihada saxda ah. Sababta Sababtoo ah bartaada gudaha ayaa loogu talagalay waxyaabaha saxda ah macnaheedu maahan in makiinadaha raadinta ay u arkaan habkaas - waxyaabaha ka baxsan goobta ee leh xiriiriyeyaasha dib ugu noqda bartaadu waa xaqiijin. Marka matoorada raadintu arkaan ereyada muhiimka ah ee tilmaamaya bartaada, waxay ku riixayaan goobtaada qiimeyntaas.
Waxaan leenahay macaamiil aan la shaqeynay halka taraafikada guud ahaan ay dhab ahaan hoos u dhacday… laakiin maxaa yeelay si ka wanaagsan ayaa loo bartilmaameedsaday, hoggaamiyeyaasha iyo beddelaaddu dhab ahaantii way kordheen. Waxay ku saabsan tahay helitaanka dhagaystayaasha saxda ah ee bartaada, ma aha oo kaliya dhagaystayaal badan. Tirakoobyada Adam waxay muujinayaan in dadku sii joogayaan waqti dheer, waxyarna ka tegayaan, in badan oo ka mid ahna ay imanayaan… taasi waa sida saxda ah ee qof walba doonayo inuu arko - mana aysan dhicin in wax laga qabto goobta!
Booqashooyinka ilaa 25% Ilaa Dib-u-naqshadaynta
Feb 13, 2011 markay ahayd 7:16 PM
Waxaan ka shakisanahay in waxa Macluumaadka Dijital ah ee Dhab ahaantii uu doonayo inuu arko ay tahay diiwaangelinno lacag badan laga siiyay adeegyadooda, oo aan ahayn oo keliya booqashooyinka iyo aragtiyada bogga, iwm. Taasi miyaanay ahayn waxa kaliya ee runtii muhiimadda leh?
Feb 13, 2011 markay ahayd 8:08 PM
Su'aal aad uwanaagsan - waanan kugu raacsanahay 100% Paul. Sida warshado badan, Adam kuma haysto geedi socod wax looga iibsado bartiisa oo waxqabadyada waxaa lagu kobciyaa iib ahaan. Aadam wuu kufiicnaa inuu bixiyo tirooyinkaan laakiin iibka lama oga halkaan. Waxaan ka shakisanahay inay noqon doonto dhowr bilood ka badan inta uu ku hogaaminayo hogaamiyayaashan marinkiisa iibka.
Febraayo 15, 2011 saacadu markay tahay 6: 29 AM
Bawlos, waxaan ku raaci lahaa in waxa aan runtii dooneyno ay tahay isbadal wanaagsan. In kasta oo aan ku leenahay nidaamka lacag bixinta khadka tooska ah (waa ka xumahay Doug), in yar oo ka mid ah macaamiisheennu ayaa mara wadadaas. Siduu Doug u sheegay waxaan ka dhalineynaa raadadka barta oo aan ku kobcino iib. Markii aan arkay faallooyinkaagii xalay ayaan dhex maray oo eegay tilmaamaha la soo saaray iyo iibka la dhammaystiray iyo isla muddadaas sanadkii la soo dhaafay. Waxaan kuu sheegi karaa inaan soo saarnay ~ 40% hoggaanno dheeraad ah oo aan ku darnay ~ 25% macaamiil ka badan sannadkan kii la soo dhaafay. Waxay noqon kartaa dhowr arrimood, hagaajinta dhaqaalaha, xilliyeed, iibka oo kordhay iyadoo ah nooca ganacsiga ee kujira qaabka koritaanka, iwm. kororka iibka. Furaha ayaa ah in ay ahayd gaadiid sharci ah.